Thermomix संग Zarangollo नुस्खा, मर्सियाको विशिष्ट ThermoRecines
Zarangollo - प्याज, अण्डा र zucchini साथ Scrambled अंडे
आज हो zarangollo। के तपाईंलाई यो थाल थाहा छ? यदि तपाईं मर्सियाबाट हुनुहुन्छ वा त्यहाँ भएको छ भने तपाईंले अवश्य मलाई बताउनुहुनेछ। तपाईंहरू मध्ये जो यो कहिल्यै लिनुभएको छैन, म तपाईंलाई यो प्रयास गर्न प्रोत्साहित गर्दछु।
यो स्वस्थ, सरल, धनी सामग्री र वास्तवमा मर्सियन बगैचाबाट बनेको छ। यो प्रकारको हो Scrambled आधारित zucchini, प्याज र अण्डाहरू। यो केको लागि राम्रो देखिन्छ?
मर्सिसियनहरूले मलाई यसो भन्छन् कि तपाईं यसलाई घरमा कसरी खानुहुन्छ, तर मलाई लाग्छ कि यो पहिलो पाठ्यक्रम वा दोस्रोमा गार्निशको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ।
मलाई थाहा छैन यदि तपाईंले पहिले नै यो कोशिश गरिसक्नुभयो भने tortilla, त्यो zucchini... यसको स्वादले मलाई जारानगोलोको एक सम्झना गराउँछ, सायद यही कारणले गर्दा मलाई यो धेरै मनपर्दछ!
1 Zarangollo - प्याज, अण्डा र zucchini साथ Scrambled अंडे
Zarangollo एक विशिष्ट मर्सियन डिश हो जो प्याज, zucchini र अण्डामा आधारित हुन्छ। स्वस्थ र स्वादिष्ट, हाम्रो Thermomix को साथ बनाउन को लागी धेरै सजिलो
Zucchini को 400 g, unpeeled र टुक्रा मा काटिएको (राम्रो छ यदि तिनीहरू जैविक खेतीबाट हो)
G०० ग्राम प्याज क्वार्टरमा काटियो
Or वा १० अण्डा
हामीले zucchini गिलास र कार्यक्रममा राख्यौं Seconds सेकेन्ड, गति 2। गिलास र रिजर्भबाट हटाउनुहोस्।
हामीले प्याजलाई गिलास र कार्यक्रममा राख्यौं Seconds सेकेन्ड, गति 3। स्प्याटुलाको साथ हामी प्याजको बाँकीलाई ढकबाट र गिलास भित्र ब्लेडतिर तान्छौं।
तेल र नुन र कार्यक्रम थप्नुहोस् Minutes मिनेट, भेरोमा, बाँया पालो, चम्चाको गति।
हामी zucchini, नुन र काली मिर्च जोडी। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
हामी अण्डाहरू र कार्यक्रम समावेश गर्दछौं १० मिनेट, भेरोमा तापमान, बाँया पालो, चम्चाको गति।
यदि हामी zucchini अधिक ध्यान दिएर हेर्न चाहान्छौं, हामी यसलाई अलि अलि काट्न सक्छौं र / वा यसलाई २० को सट्टा १ minutes मिनेट पकाउन सक्छौं।
थप जानकारी - Zucchini आमलेट
स्रोत - हाम्रो क्षेत्रीय खाना (क्याटालोनिया, भ्यालेन्सियन समुदाय, बेलारिक टापु र मर्सिया)
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: क्षेत्रीय भोजन, सलाद र तरकारीहरू, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » सामान्य » क्षेत्रीय भोजन » Zarangollo - प्याज, अण्डा र zucchini साथ Scrambled अंडे
मंगलवार बगैंचाबाट? हाहााहा .. पक्कै मर्सियन राम्रो हुनेछ। हेर, म कहिलेकाहिँ मर्सिया गएको छु, तर मलाई यो कोशिस गर्न मन परेन, तर मलाई पक्का छ कि यो प्रयास गर्ने बित्तिकै, यो घरमै स्थिर हुनेछ। चुम्बन!
तपाईलाई एस्पेरान्जा थाहा छ, तपाईले यो कोशिनिको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ, जहाँ-जहाँ तिनीहरू आएका थिए।
राम्रो, हिजो मैले यो गरें तर यसले मलाई अलिकति चुनौती दिए, किनभने यो पुतली मैले प्रयोग नगरेको हुन सक्छ? वा किन मैले पुरानो थर्मोमिक्समा गरें?
प्रिमिसिमालाई जवाफ दिनुहोस्
यो त्यस्तै हुन गइरहेको छ ... तपाईंले थ्रटल र वेग १ राख्नुपर्नेछ। यस तरिकाले तपाईं २१ मा पूर्ण रूपमा गर्न सक्नुहुनेछ। मलाई आशा छ तिमीलाई यो मन पर्ने छ।
मैले यो नुस्खा बनाएको छु र यो एकदमै स्वादिष्ट छ। Zucchini बनाउन को एक धेरै सजिलो तरीका र सामग्रीहरू जुन तपाईं सँधै घरमा हुनुहुन्छ
Mª येशूलाई जवाफ दिनुहोस्
अवश्य पनि म गर्छु, मलाई यो पनि धेरै मनपर्दछ। तपाईंको टिप्पणी MªJesús को लागी धन्यवाद, मलाई खुशी छ कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो।
मलाई यो मन परेको छ, होमल्याण्ड बनाउँदै। म यो धेरै राम्रो नुस्खा कोशिस गर्दछु, तपाईले मलाई रुनु भयो। म्याड्रिड, Muss बाट
Muss लाई जवाफ दिनुहोस्
र म निश्चित रूपमा होमल्याण्ड बनाउन जारी राख्नेछु। धन्यवाद मुस Parma बाट चुम्बनहरु !!
यो मेरो लागि एक बिग्र धुवाँ बाहिर आएको छ कि म यसलाई एक सानो भुँडी बनाउन सक्छु कि यसलाई अण्डा दिनुहोस्?
अधिक भाँडालाई दाग नलगाउन, म अण्डाहरू थप्नु अघि म श्रोप हटाउनेछु। यस तरिकाले हामी पान stain लाई दाग नलगाउने गर्दछौं
नुस्खाका लागि धन्यवाद, यो वास्तवमै राम्रो आउँछ!
मसँग केवल एउटा प्रश्न छ, किन यो जलगर्ने / गिलासको फेदमा टाँसिएको अन्त हुन्छ? मसँग टीएम have१ छ, मैले यो पत्रको नुस्खा पछ्याएको छु र मैले यसलाई गरेको times पटक आगोले जलाइसकेको छ some मैले प्रक्रियामा २- times पटक स्प्याटुलाको साथ तल सार्नको लागि केही थप तेल हाल्ने प्रयास गरें, र केहि छैन, सँधै जलेको ...
हेर्नुहोस् यदि कसैले मलाई मद्दत गर्न सक्छ कि।
अभिवादन र धन्यवाद,
धन्यवाद, जुलियो, तपाईको टिप्पणी को लागी।
म यसलाई 31१ को साथ पनि गर्दछु ... सायद यो zucchini मा निर्भर गर्दछ, यदि यससँग बढी वा थोरै पानी छ ... केहि मिनेट कार्यक्रम चलाउन प्रयास गर्नुहोस्, के हुन्छ हेर्नुहोस्।
अंगालो र खुशीयाली नयाँ वर्ष!
नमस्ते एसेन, सब भन्दा पहिले तपाईलाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। मैले भर्खरै यो बनाएँ र यो एकदमै स्वादिष्ट छ केवल कुरा र यो म आलोचना होइन, म मर्सियन जस्तो हुँ र म झुकिनी थोरै काट्छु, र यसलाई थोरै समय पनि पकाउछु, ताकि टुक्रा थोरै देख्न सकून्। स्वादको, धेरै धनी।
धेरै धेरै धन्यवाद, लोला! मलाई तपाईंको टिप्पणी मन पर्यो र मैले "नोटहरू" खण्डमा तपाईंको सल्लाह समावेश गरेको छु।
लोला पास्टर भन्यो
लोला पास्टरलाई जवाफ दिनुहोस्
भेनिला स्वाद प्रोटीन शेक